Serving vulnerable children, poor families and communities in Myanmar, (Burma)
Home > What we do > မြန်မာလိုဖတ်ရန်
ကျွန်တော်တို့ ရည်ရွယ်ချက် (ရည်မှန်းချက်)
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကလေးငယ်များသည်လည်း အသက်ရှင်သန်ခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်း၊ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုး ခြင်းနှင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းများအတွက် ပါဝင် လုပ်ဆောင် ခွင့် ရှိကြသူများဖြစ်ကြသည်။ ထိုကလေးငယ် များကို ပြုစုခြင်း၊ ကူညီစောင့်ရှောက်ပေး ခြင်းနှင့် မြှင့်တင်ပေးခြင်းသည် ကျွန်တော်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်သည်။
ကလေးငယ်များ၏ ဘ၀ကို ရေတိုအတွက်သာမက ရေရှည်အထိ အကျိုးရှိအောင် ပောင်းလဲပေးခြင်း။ စားဝတ်နေရေး ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။ ပညာရေးမြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ (ပညာသင်ကြားပေးခြင်း) ကလေးငယ်များ၏ အနာဂတ်ဘ၀သာယာလှပရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်အကိုင်အတွက် ကူညီမြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ အားဖြည့်ပေးခြင်း။
ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများကို လုံလောက်စွာ သုံးခြင်းအတွက် ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူပေး သည်။ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ရရှိခံစားသော အကျိုးကျေးဇူးများအတွက် တာဝန်ယူထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အလှူရှင်များနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (သို့) လုပ်ငန်းစပ်တူ (Partner) များအတွက် တာဝန်ယူပေးခြင်း၊ အထူးသဖြင့် ကလေးငယ်များကို ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူပေးသည်။
မိဘမဲ့ကလေးငယ်များကို ကူညီစောင့်ရှောက်ခြင်း ။ ။ မိဘမဲ့ကလေးတစ်ယောက်စီတိုင်းကို လုံခြုံသော မိသားစုဘ၀၊ ပိုင်ဆိုင်စေခြင်း၊ အာဟာရပြည့်ဝသော အစားအစာများဖြင့် ကျွေးမွေးခြင်း၊ လုံခြုံ သပ်ရပ်သော အ၀တ်အစားများထောက်ပံ့ခြင်း၊ သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေသုံးစေခြင်းနှင့် အရည်အချင်း ပြည့်မီသော ပညာရေးများပေးခြင်းတို့ဖြင့် ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးသည်။
ပညာရေး ။ ။ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိကသော့ချက်သည် ပညာရေးဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်သည်။ သက်ရှည်ကျန်းမာခြင်း၊ ၀င်ငွေကောင်းခြင်းနှင့် အနာဂတ်ဘ၀အောင်မြင်တိုးတက်ခြင်း အတွက် ပညာရေးသည် အဓိကအရေးပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကလေးငယ်တိုင်းသည် အရည်အချင်းပြည့်မီ ကောင်းမွန်သော ပညာရေးရရှိစေရေး၊ အတတ်ပညာရရှိကျွမ်းကျွင်စေရေး၊ အနာဂတ်ဘ၀အတွက် ကောင်းမွန်သော အသိပညာ၊ အတတ်ပညာကြွယ်ဝ၊ ကျွမ်းကျင်စေရေးအတွက် ဧဒင်သစ်မေတ္တာဖောင်ဒေး ရှင်း သည် အားသွန်ခွန်စိုက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါသည်။
ကလေးငယ်များ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကလေးငယ် များသည် အိမ်၌၎င်း၊ ကျောင်း၌၎င်း၊ နေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်၌၎င်း ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းအန္တရာယ်၊ အသိအမှတ် မပြုခြင်း အန္တရာယ်၊ အလွဲသုံးစားခံရခြင်းအန္တရာယ်၊ စော်ကားနှိပ်စက်ခြင်းအန္တရာယ်နွံထဲတွင် ကျရောက် နေကြပါသည်။ ထိုသို့သော ကလေးငယ်များကို ထိုကဲ့သို့သော အန္တရာယ်မျိုးစုံမှ ကင်းလွတ်အောင် ဧဒင်သစ်မေတ္တာဖောင်ဒေးရှင်းသည် ရပ်တည်နေပါသည်။
လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီ(အထောက်အပံ့) ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူသားချင်းစာနာမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အခက်အခဲအကျပ်အတည်းများကိုလည်း ဧဒင်သစ်မေတ္တာဖောင်ဒေးရှင်းက တုန့်ပြန်မှု ဖြေရှင်းမှုပြုလုပ်ပေးသည်။ အခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်းတိုင်းတွင် ကလေးငယ်များသည် အားအနည်းဆုံး၊ အခံရအများဆုံးဖြစ်ကြသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် စစ်ပွဲများကြောင့် ဒုက္ခရောက်ရသော ကလေးငယ် များကို ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းနေရာချပေးခြင်း၊ အစာရေစာများကို အမြန်ထောက်ပံ့ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက် ပေးသည်။ အခက်အခဲအကျပ်အတည်းကြောင့် ခံစားရသော ဝေဒနာမျိုးစုံကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုသ ထောက်ပံ့ပေးမှုအမျိုးမျိုး၊ လုံခြုံသောနေရာများ၌ နေထိုင်စေခြင်းနှင့် လုံခြုံသော နေရာများတွင် ပညာသင် ပေးခြင်း၊ ကစားစေခြင်းအားဖြင့် သူတို့၏ ဝေဒနာမျိုးစုံကို ကုသစောင့်ရှောက်ပေးလျက်ရှိသည်။
ကျေးလက်တောရွာဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ။ ။ ကျေးလက်ဒေသများတွင် နေထိုင်သူများ၏ အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဘ၀ကိုမြှင့်တင်ပေးရန်လည်း ဧဒင်သစ်မေတ္တာဖောင်ဒေးရှင်းသည် ရည်ရွယ်လျက် ရှိ သည်။ ကျေးလက်ဒေသရှိ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကလေးငယ်များသည် မိဘများက မထောက်ပံ့နိုင်၍ ကျောင်းမတက်နိုင်ကြသဖြင့် ပညာမတတ်ကြပေ။ မိဘများသည် အလွန်ဆင်းရဲသောကြောင့် ကလေး ငယ်များ ပညာမဲ့ဖြစ်ကြရသည်။ ကလေးငယ်များကို ပညာရေးအားဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးခြင်းက အနာဂတ်တွင် သူတို့၏ မိသားစုများ၊ ကျေးရွာများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးက်ဖို့ရန်အတွက် အကျိုးပေးလိမ့်မည် မှာ မလွဲဧကန်အမှန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပညာရေးမြှင့်တင်ပေးခြင်းသည် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုအတွက် အဓိကသော့ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ရည်ရွယ်ချက် ။ ။
(1) လုံလောက်သော အဆောက်အဦးတည်ဆောက်ပေးခြင်း။
(2) လူသားအရင်းအမြစ်၊ ၀င်ငွေအင်အားနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများတိုးမြှင့် ပေးခြင်း ။
(3) စားဝတ်နေရေးအတွက် အာမခံပေးနိုင်ခြင်းကို ကူညီမြှင့်တင့်ပေးခြင်း။
WE LOVE TO HELP Suffering Children, Families and Communities in Myanmar Our mission To serve children, poor families and communities to achieve immediate and lasting c...
Let's help one another(Action Love)
Helping Children. We are dedicated to bettering the lives of suffering children. Our desire is t...
If you have any questions or need more information, please contact us at: New Eden Charity Found...
New Eden Charity Foundation (Reg.No. 0588)
No. 360(A), Anawma street, 93 block, Dagon Seikan Township,Yangon, Myanmar
Email: newedencfmm.org@gmail.com, Phone: +95(0)9961648083, +95(0)9892942085